Rotterdam ingenye yezindawo kakhulu eYurophu ofinyelelekayo ngesitimela. Uzoba ukugibela ngoba cishe amahora amane, futhi ngeke ashintshe izitimela e Brussels. Akufanele bachithe phezu £ 185 ku ithikithi lakho ukubuya. Sekuyisikhathi eside Rotterdam labetibambile uhlobo idumela ezimbi ngenxa port yayo band lutho Cranes kanye ekuhanjisweni. Okusanda, it is shaking off ukuthi idumela nokuthola izivakashi ukusibona ngukukhanya entsha ngokuphelele. Lesi sikhathi emhlabeni, ozokuthanda komuzi walo kwezobuciko amagugu afihlekile, iMyuziyamu iBoijmans Van Beuningen eqhuba umdlalo kusuka kuBrueghel Omdala kuya eSalvador Dali. Kuningi ukubona futhi nakho lapha, kanye neqiniso lokuthi Rotterdam iyatholakala ngesitimela kungenye nje plus.
Ngaphezu kwalokho, endleleni niya khona uzobona abadumile Tulip amasimu, lokhu nakanjani kuzokuletha edolobheni nge-vibe enhle.
Indlela eshesha kunazo zonke yokuthola ukuthi Antwerp ngo ukuhamba cishe amahora amane ngesitimela nokushintsha izitimela e Brussels. Ngeke ukhokhe imali engaphezu kuka- £ 87 ngethikithi eliyimbuyiselo eliyisimanga. Naphezu kwesikhundla yayo uyinqaba (umuzi ngasemngceleni ophakathi Belgium kanye Netherlands), Antwerp, Okwasimangaza, super ngezitimela. Ungathenga ngisho "Noma yimuphi Station Belgian" ithikithi ngokusebenzisa Eurostar bese kuphi ezweni, Antwerp kuhlanganisiwe - ngesikhathi ngentengo efanayo njengendlela oluya Brussels. Antwerp kuyoba mnandi kakhulu bonke abathandi idayimane: Antwerp, Belgium prides ku Diamond yayo District okuyinto uqhosha wokuba emzini lapho abanye ahlabayo ezehlukile kakhulu, ezipholisha, futhi ukuhweba idayimane / amagugu zenzeke.
Xhumana Londoloza Isitimela ukubhuka uhambo lwakho Isitimela izindawo eYurophu ofinyelelekayo ngesitimela futhi sizobe kuyokuqeda iyiphi yokubhuka Imali ezibizayo, izinqubo eziyinkimbinkimbi yokubhuka, futhi amanani engenakwenzeka. Sikuphathele nawe simboziwe zonke lezi zigaba. futhi, once konke sika ihlelwa – qiniseka ukuthi ukujabulela yakho ugibele isitimela uya khona, thatha izithombe eziningi, futhi usazise ukuthi konke kuhambe kanjani!